"Izao no lazain’i Jehovah … : Antsoy Aho, dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao."Jeremia 33:2,3
"Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondòny, dia hovohana ianareo."Matio 7:7
Raha namerina namaky ny lahatsoratra fikarohana nataon’ny zandriko vavy aho, dia tafajanona teo amina fehezanteny maromaro: ny halavany sy ny voambolana teknika nampiasaina dia nanakana ahy tsy hahatakatra izay novelabelarina. Rehefa avy nikaroka ela aho, dia nilavo lefona ary nandray ny findaiko ka nanontany azy hoe: «Inona moa no tianao lazaina ao amin’ity andininy ity?». Tonga izy dia nanazava, ka azoko ny zavatra rehetra!
Indraindray isika dia miezaka ny hahatakatra ny Baiboly, tahaka ahy tamin’ireo andininy sarotra ao amin’ilay lahatsoratra fikarohana: rasarasaina ny fehezanteny tsirairay, ny teny tsirairay, iezahana hamantatra ny dikany. Ary na dia azontsika aza ny heviny mivantana, ara-bakiteny, dia mbola tsy maintsy fantarina ihany koa ny heviny ara-panahy. Amin’izany isika dia mila an’Andriamanitra mihitsy, hanazava ny saina sy ny any am-po lalina indrindra any. Raha tsy izany, ahoana moa no hahatakarana ireo zavatra tsy hita maso, maharitra mandrakizay, asehon’ny Baiboly antsika.?
Toy ny tamin’ny namerenako namaky ny lahatsoratry ny zandriko, dia aoka isika hitodika mivantana amin’Ilay nampanoratra ny Baiboly. Iza moa, mihoatra Azy, no mahafantatra izay tiany holazaina amintsika? Tsy hamingavinga antsika velively Izy, noho ny fahalementsika sy ny tsy fahatakarantsika, fa mainka aza hampirisika antsika hatoky Azy. Dia hamaly antsika Izy!
Misy ve fanontaniana, na zavatra tsy azo, na "nahoana" mampijaly saina anao? Amin’ny alalan’ny vavaka, dia afaka manatona an’Andriamanitra ianao, ary hanatona anao koa Izy (Jakoba 4:8). Manaraka izany, manokàna fotoana hihainoana Azy sy hiarahana aminy. Hampisehoany “zavatra lehibe sady saro-pantarina” ianao, dia izay rehetra mahakasika ny fitiavany. Izany no ampanantenainy.